We.com.mm - နိုင်ငံခြားသားတွေ အကြိုက်တွေ့တဲ့ မြန်မာ့အစားအစာ (၈) မျိုး
နိုင်ငံခြားသားတွေ အကြိုက်တွေ့တဲ့ မြန်မာ့အစားအစာ (၈) မျိုး
မြန်မာ့အစားအစာတွေဟာ မြန်မာမှုတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေလေ့ရှိတာကြောင့် နိုင်ငံခြားခရီးသွားတွေဟာ စိတ်ဝင်စားကြပါတယ်။ ဗိုက်ဆာလို့စားမယ်ဆိုရင်လည်း ဝေးဝေးသွားရှာစရာမလိုဘဲ လမ်းထိတ်တွေ၊ ဈေးတန်းတွေမှာ အလွယ်တကူ ပူပူနွေးနွေးစားသုံးလို့ရတာကြောင့် သဘောကျကြပါတယ်။ သဘောအကျဆုံးကတော့ အရသာရှိတဲ့အပြင် ဈေးနှုန်းသက်သာတာပါ။ နိုင်ငံခြားသားတွေ ခံတွင်းအတွေ့ဆုံး မြန်မာအစားအစာတွေက ဘာတွေများဖြစ်မလဲ။
မြန်မာတွေသာမက နိုင်ငံခြားသားတွေလဲ မုန့်ဟင်းခါးကို မနက်စာအဖြစ်စားရတာ ကြိုက်နှစ်သက်ကြပါတယ်။ မုန့်ဟင်းခါးတစ်မျိုးတည်းနဲ့ ငါး၊ ဆန်၊ ကြက်သွန်၊ ကြက်ဥ၊ နံနံပင် စတဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေ အကုန်ပါတာကြောင့် နိုင်ငံခြားတွေ နှစ်သက်ကြပါတယ်။
လဖ္ဘက်ကို အရည်လိုသာမက အဖက်လိုပါ စားသုံးတဲ့လူမျိုးတွေမှာ မြန်မာလူမျိုးကထိပ်ဆုံးကပါ။ မြန်မာ့လဖ္ဘက်က နိုင်ငံခြားသားတွေကြားမှာ ရေပန်းစားတဲ့အစားအစာပါ။ ထမင်းစားပြီးတဲ့အခါ အချိုပွဲအစား လဖ္ဘက်သုတ်ဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံတဲ့ ဓလေ့ကို နိုင်ငံခြားသားများ အလွန်သဘောကျကြပါတယ်။
ရှမ်းလူမျိုးတွေရဲ့အစားအစာဖြစ်တဲ့ ရှမ်းခေါက်ဆွဲကို နိုင်ငံခြားသားတွေဟာ ဟိုတယ်တွေမှာထက် အင်းလေးမှာ စားရတာ သိပ်ကိုအရသာတွေ့ပါသတဲ့။ တရုတ်တွေရဲ့ခေါက်ဆွဲနဲ့မတူဘဲ ရှမ်းခေါက်ဆွဲကလည်း အရသာတစ်မျိုးနဲ့စားကောင်းတဲ့ မြန်မာ့အစားအစာအဖြစ် သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။
၄. ကြက်သား ကာလသားဟင်း
နိုင်ငံခြားသားတွေဟာ ဆီများတဲ့အစားအစာတွေကို သိပ်မကြိုက်တာကြောင့် ကာလသားဟင်းလို ဆီလည်ရေလည်လေးကို ကြိုက်ကြပါတယ်။ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကလည်း သူတို့ပုံမှန်သုံးနေကျ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပေမဲ့ အနောက်တိုင်းအရသာနဲ့မတူပဲတစ်မူထူးခြားနေတာ၊ ချက်နည်းက ရိုးရှင်းပြီးတော့ အရမ်းအရသာရှိတာ တွေကြောင့် နိုင်ငံခြားသားတွေက အကြိုက်တွေ့ကြပါတယ်။
ဈေးလည်းတန်တဲ့အပြင် နေရာတော်တော်များများရနိုင်တာကြောင့် သဘောကျကြပါတယ်။ ပဲကုလားကြော်၊ အာလူးကြော်၊ ကြက်သွန်ကြော်၊ ဂေါ်ရခါးသီးကြော် နဲ့ဘူးသီးကြော် စတဲ့အကြော်စုံကို ပူပူနွေးနွေး ကြွပ်ကြွပ်လေးစားရတာကြိုက်ပါသတဲ့။ အကြော်နဲ့တို့စားရတဲ့ အချဉ်ရဲ့အရသာဟာလည်း သူတို့အတွက်တော့အဆန်းပေါ့။
ထိုင်းခေါက်ဆွဲနဲ့တူတဲ့ မြန်မာ့အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲကိုလည်း သဘောကျကြပါတယ်။ အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲရဲ့အရသာကိုသာမက အနံ့ကိုလည်း အလွန်ကြိုက်ပါသတဲ့။ အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲက အီပြီး လေးလေးပင်ပင်အရသာမျိုးဖြစ်တာကြောင့် ပေါ့ပေါ့ပါးပါးအရသာမျိုးကြိုက်တဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေကတော့ ငြုတ်သီးမှုန့်နဲ့သံပုရာသီး ထည့်စားကြလေရဲ့။
ရွှေရင်အေးကို မြန်မာ့ဖာလူဒါလို့နိုင်ငံခြားသားတွေက ယူဆကြပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံက ပူပြင်းခြောက်သွေ့တဲ့ရာသီရှိတာကြောင့် ဒီလိုအစားအစာမျိုးရှိနေတာကို နိုင်ငံခြားသားတွေက ကျေးဇူးတင်နေလေရဲ့။ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကလည်း အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့လျှာနဲ့ကွက်တိပဲ။ သူတို့ကအချိုသိပ်စားတာကိုး။
နိုင်ငံခြားသားတွေကတော့ မြန်မာ့ထမင်းဝိုင်းကို မြန်မာဘူဖေးလို့ခေါ်ကြပါတယ်။ သူတို့နိုင်ငံမှာက ဆိုင်မှာ မှာစားရင် ဟင်းတစ်မျိုးဆိုတစ်မျိုးပဲ ရတာလေ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာက အသားဟင်း၊ အရွက်ဟင်း၊ အရည်သောက်၊ ငပိရည်၊ တို့စရာ စသည်ဖြင့် ဟင်းအမယ်စုံကို နည်းနည်းစီစားကြတာကိုး။
အခုပြောခဲ့တာတွေကတော့ မြန်မာ့အစားအစာတွေထဲက နိုင်ငံခြားသားအများစု အကြိုက်တွေ့တဲ့အစားအစာတွေဖြစ်ပါတယ်။
Ref : tripsavvy
ဟင်းချက်တဲ့နေရာမှာ သံလွင်ဆီကို ပြောင်းသုံးခဲ့မယ်ဆိုရင်
2 years ago by June Nine Aung
နှမ်းဆီနံ့ သင်းသင်းလေးနဲ့ ဝက်သားကြက်သွန်မြိတ်ကြော်
14 days ago by Psyche
ကင်ဆာ မဖြစ်ချင်ရင် ဒါတွေ လုံးဝမစားပါနဲ့ !
11 months ago by June Nine Aung
ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာရေပန်းစားသွားတဲ့ အသက် ၇၀ ကျော် ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာရဲ့ အလန်းစားဓာတ်ပုံများ
9 months ago by Katie Scarlett
မြန်မာ့ဖက်ရှင်ကို အင်တာနေရှင်နယ်ဆန်ဆန် ဖန်တီးထားတဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့ Stylist အောင်ကိုမိုး
သင့်ကို ဝက်ခြံပေါက်စေတဲ့ အဆိုးဆုံး အစားအသောက် ၆ မျိုး
3 years ago by Gabriel
©2017-2021 We Media.